Madaxweyne Siilaanyo oo safar u tagay Boorama | Salaan Media
Madaxweyne Siilaanyo oo safar u tagay Boorama
(SM.-Hargeysa) Madaxweynaha Somaliland Md Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa la filayaa inuu Saaka u anbabaxo Magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal, halkaasoo uu booqasho hal maalin ah ku joogi doono, .
Madaxweyne Axmed-siilaanyo ayaa la sheegay in safarkiisu uu la xidhiidho arrimo door ah, kuwaasoo ay ugu waa weyn yihiin furitaanka Mashaariic horumarineed oo laga hir-geliyey Magaalada Boorama,isla markaana waxa uu kormeer ku samayn doonaa Xafiisayda Dawlada Ee Gobolk awdal.
Socdaalka uu Madaxweynaha Somaliland Axmed-siilaanyo ku tagayo Magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal, ayaa la filayaa inay ku weheliyaan Wasiiradda ka soo jeeda deegaankaas, iyadoo Madaxweynaha iyo Madax-dhaqmeedka gobolka Awdal-na ay gondaha is dari doona.
Arrimaha la filayo in Madax-dhaqmeedka Awdal ay Madaxweynaha soo hor dhigaan, ayaa waxa ka mid ah Murankii ka dhashay doorashadii golaha deegaanka ee Saylac oo khilaaf cakirani uu ka qarxay, kaasoo u dhaxeeyey labada beelood ee deegaankaas wada dega oo beesha Ciise ay qaadacday natiijadii laga soo saaray degmada Saylac iyo Lughaya, waxaana uu aakhirkii khilaafkaasi isku rogay mid dhaliya shaqaaqooyin yar yar aan sidaas u buurnayn, .
Dhinaca kalena, waxa labadii habeen ee u dambeeyey Magaalada Boorama ku sugnaa Wasiirka Madaxtooyada Somaliland Xirsi Xaji Cali oo booqasho gogol xaadha ku tagay, isagoo kulamo la sii qaatay Madax-dhaqmeedka iyo Odayaasha deegaankaas, isla markaana Mashaariic cusub dhagax dhigay.